Kedu ihe eserese eserese na-amụ? | Nhazi na ọmụmụ ihe
Maite Nicuesa | 28/12/2021 23:49 | Emelitere ka 29/12/2021 00:00 | Ọzụzụ
Kedu ihe eserese eserese na-amụ? Cartography bụ otu n'ime ọzụzụ nke bụ akụkụ nke Geography. Site na maapụ ọ ga-ekwe omume ịnweta ihe ngosi nke akụkụ dị iche iche nke ụwa. N'ụzọ dị otú a, map bụ isi iyi nke ozi a nwapụtara, ebe ọ bụ na ọ na-egosi ọdịnaya nke na-ezo aka kpọmkwem na eziokwu. Ya bụ, ọ na-akọwa ma na-akpụzi otu ihe gbara ya gburugburu.
Enwere ihe okike na-akọwa gburugburu ebe obibi site na echiche izugbe. Mana ọzọkwa enwere atụmatụ isiokwu na-emesi otu okwu ike. Cartography bụ isiokwu nwere ngwa kpọmkwem na ngalaba njem nlegharị anya.
1 Ihe osise ndị njem nlegharị anya
2 Cartography dị ka ihe mmụta
3 Ihe osise dijitalụ
4 Mkpa nke eserese eserese na akwụkwọ
Ihe osise ndị njem nlegharị anya
Mgbe mmadụ gara ebe mbụ, ha nwere ike ileba anya n’atụmatụ dị iche iche iji duzie onwe ya wee ruo n’isi ihe ndị kacha mara amara. N'otu aka ahụ, ozi dị otú ahụ na-enye ohere ịtụ anya mbata n'obodo site na nhazi kachasị mma. Ọtụtụ n'ime ndị ọbịa na-anụ ụtọ obere oge na ebe ha na-aga na-abịa na Office Tourist. Ebe nrụtụ aka na nghazi ebe enwere ike ịchọta ihe ndị nwere mmasị iji nyochaa gburugburu ebe obibi, chọpụta ịma mma ya na imezu ebumnuche nke njem nke onwe. N'ihi nke a, eserese ndị njem nlegharị anya na-arụ ọrụ bara uru.
Maapụ na-adọrọ adọrọ na-anọchi anya gburugburu ma na-ebuga ozi doro anya gbasara ya. Hazie ozi site na iji mgbasa ozi anya.
Cartography dị ka ihe mmụta
Maapụ bụkwa akụrụngwa bara uru na agụmakwụkwọ. Ha na-enye ụzọ enyemaka iji mụta ihe ọmụma dị iche iche ma jikọta ozi ọhụrụ. Ya mere, ha nwekwara njikọ na ngalaba nkuzi. N'oge gara aga, anyị kwuru na e debere echiche a n'ọhịa nke Geography. Ya mere, onye na-ese foto bụ ọkachamara na ọzụzụ, nkwadebe na ahụmahụ imepe maapụ ndị ga-emezu ebumnuche gị mbụ. Ọfọn, ngosi nke usoro n'onwe ya dị mkpa. Map dị mma na-ahụkwa ihe ịchọ mma.
Map na-akọwa mpaghara n'ụzọ eserese. Ọ na-enye ụzọ nke ozi anya nke nwere ike jikọọ na eziokwu n'onwe ya. Ya mere, ọ na-akwalite nchọpụta, nyocha na nyocha nke ebe. Ọ nwere ike rụọ ọrụ dịka enyemaka nkwado na mgbalị otu nke atụmatụ ahụ na-eme ka mgbanwe echiche na data dị mfe.
Ihe osise dijitalụ
Ya mere, eserese eserese dị ezigbo mkpa taa ma nọrọkwa ebe a ma ama na akụkọ ntolite. Ọ bụ isiokwu malitekwara site na mpụta teknụzụ ọhụrụ. Buru n'uche na usoro omenala a na-ahọrọ iji mee ihe nnọchianya bụ akwụkwọ. Otú ọ dị, ugbu a, ọ pụkwara inye usoro dị iche iche maka ụgbọ elu. Na eserese dijitalụ na-eme ka o doo anya. Atụmatụ abụọ a nwere ọdịiche mana na-edobe otu isi.
N'okwu nke ikpeazụ, ekwesịrị ịkọwapụta na nkwado dijitalụ na-enye ohere ka emelite ọdịnaya iji mee ka ọ dị na ọnọdụ ọhụrụ. Ụgbọ elu nke emere na mpempe akwụkwọ, n'ụzọ megidere nke ahụ, na-ejigide onyinyo ya na-adịgide adịgide.
Mkpa nke eserese eserese na akwụkwọ
Kedu ihe eserese eserese na-amụ? Cartography dịkwa nnọọ na akwụkwọ. Ụfọdụ akụkọ ihe mere eme na-egosi ihe ịtụnanya nwere ike ị nweta site na maapụ. Maapụ nke na-akpọ gị ka ị hapụ echiche gị ka ọ felie, pụọ iji zute eziokwu wee merie ebumnuche ọhụrụ. N'ihi nke a, akwụkwọ map na-aghọkwa atụmatụ onyinye Krismas ga-ekwe omume ma ọ bụ ihe ijuanya na-akpọ gị òkù imeri ọhụụ ọhụrụ na afọ ọhụrụ.
Maapụ na-aghọkwa ụzọ eji egwu egwu wee nweta mmụta ọhụrụ site na ihe ọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nhazi na ọmụmụ ihe » Noticias » Ọzụzụ » Kedu ihe eserese eserese na-amụ?